Monday, May 20th, 2019 - 13:46:14
Monday April 29, 2019 - 13:43:22 in Wararka by Hussein Hadafow
Kulankan oo ahaa kulanki labaad ee tartanka xiddigaha kubadda Gacanta 2019 ayay labada koox oo ku kala cayaarayayay magacyada Shirkadaha warbaahinta Astaan Sports oo ka tirsan Astaan Media iyo Muqdisho Cable soo bandhigeen kulan ciyaareed taageerayaashu ka warhaleen dhawaqa seeriga cadaynaya dhamadka qaybta koowaad ee cayaarta sida uu xiisaha u lahaa awgeed.
Xiddigaha ku cayaarayay Muqdisho Cable ayaa bilowga cayaarta ahaa kuwa markasta hogaanka cayaarta hayay waloow ay maraskasta astaan ka dagaalamaysay in wax ka badan hal gool hogaanka loga qabto isla markaana soo barbaraynaysay, waxaase qaybta hore lagu kala nastay 13-12 oo ay hogaanka ku hayaan Xiddigaha Astaan.
Marki laysku laabtay Astaan Sports ayaa 3 gool hogaanka ku qabatay waxaase maya ku yiri Xiddigaha Muqdisho oo 3 gool oo si degdeg ah loo dhlaiyay kusoo barbareeyay waxayna cayaartu noqotay mid hogaankaaan kooxi ku nasan, basle ugu dambayn waxay guusha 24-23ku raacday xiddigaha Astaan Sports.
C/raxmaan Xuseen Maxamed ( Cadde) ayaa noqday dhaliyaha goolasha ugu badan ee kulanka waxuu shabaqa ku hubsaday9 gool.
Maanta waxaa jiri doona hal kulan waxaana wada ballansan xiddigaha Generaal Daauud GYM iyo Umah Hospital.